Migumisiro yeCOVID-19 pamagetsi emagetsi | ECommerce nhau
Zvese zviripo panguva ino zvinotenderedza iyo inoshungurudza COVID-19, kunyangwe kune chikamu chemashopu kana mabhizimusi epamhepo. Nekuti mukuita, ine mhedzisiro kubva kwavasingakwanise kubviswa kuyera mhedzisiro yavo munharaunda yese. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti iyo coronavirus chiitiko chinounza kuti zhinji e-commerce inoshanda muSpain inoenderera ichishanda senge dambudziko iri risati ratanga.
Iko kusagadzikana kweiyo coronavirus mune yakajairwa kwakavhara mamirioni evatengi kumba kwavo. Pasina mukana wekubuda, kunze kwekuenda kubasa, zadza tangi, enda kukhemisi, tora zvipfuyo zvekufamba, tenga mushonga kukhemisi kana kuenda kuchitoro. Izvo zvinotengwa zvinogona kuitwa mumunhu zvakaderedzwa kune izvo zvigadzirwa zvinogona kuwanikwa muchitoro chekudya, kana hypermarket. Mune zvimwe zviitiko izvi zvinogona kusakwana uye zvimwe zvinhu zvinodiwa, izvo mabhizinesi epamhepo anoramba achipa masevhisi avo.
Uyu ndiwo mugumisiro wekutanga weizvo COVID-19 yakaunza uye izvo zvechokwadi zvinobatsira zvitoro zvepamhepo kutenderera nyika. Kupfuura izvozvo vanazvo kuwedzera kutengesa yezvigadzirwa, masevhisi kana zvinyorwa zvinotangisa mhando iyi yemakambani edhijitari. Muchirevo ichi,
1 COVID-19 mubhizinesi redhijitari
2 Chinja chip
3 Mhedzisiro pamakambani makuru e-commerce
4 Ichokwadi icho chikamu chinozviwana icho
COVID-19 mubhizinesi redhijitari
Asi gore rino rinopinda munhoroondo nekuda kwekuonekwa kwehutachiona hune njodzi hucha shandura maitiro mubazi revatengi: Asi zvichanyatsoita sei chitoro kana bhizinesi rehunhu uhwu? Zvakanaka, maererano neongororo yakaitwa, kutengesa nedhijitari midhiya kwakawedzera pakati pe30% uye 50% kubva munaKurume 3, pakatanga kuziviswa hutachiona hweCOVID-19 munyika dzakakosha kwazvo pasi rose.
Kubva pane ichi chaicho, mapuratifomu epamhepo anopa sarudzo yekutambira akasiyana zvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu pasina kusiya imba. Neyezve mukana wekuti zvigadzirwa zvavanazvo muzvitoro zvepanyama zvinotengeswawo padhijitari. Izvi zvinomiririra kutangwazve mumabhizinesi avo.
Sezvo nekumisikidza kwezvishandiso zvine simba muchimiro chekushandisa kwetekinoroji ine huwandu hwakawanda hwe zvokudya kumba, mitambo, audiovisual kana zvetsika zvemukati, pakati pezvimwe zvakakosha. Kubva panguva ino yekutarisa, inogadziridza nzvimbo yemushandisi kutsvaga kuburikidza neGPS system. Nekuwedzera kwetekinoroji nzira yekusimudzira kudiwa kubva kune vatengi kana vashandisi.
Chero zvazvingaitika, mhedzisiro ichave nechirwere ichi inochinja nzira yezvigadzirwa zvekushambadzira, semuenzaniso, kushandiswa kwemari kuchadzikira uye kushandiswa kwemakadhi kuchakwira, pamwe nekutengeserana kuburikidza nekushandisa uko mapuratifomu aya anotakura pamusoro peInternet. . Iko kunokosha kwazvo kuti iwe urambe uchifunga kuti kubva panguva ino chaiyo iyo yavo yakakosha mipiro ndeinotevera yatinokufumura pazasi:
Kugona kwako kusvika kune mamwe mapoinzi papasi.
Inovhara mitsara dzakasiyana dzebhizinesi, kubva pazororo uye varaidzo zvikumbiro kusvika kune zvehunyanzvi. Kana kusarudzika kwerudzi rupi zvarwo.
Kukanganisa kwayo hakuzove kwakaipa zvakanyanya kana tichienzanisa nechipo chinopihwa nezvitoro zvepanyama kana zvakajairika.
Ivo zvirinani kupindura kune izvo zvido zviripo mudzimba panguva iyo hupenyu hwemhuri hwakavakirwa munzvimbo dzino dzakavharwa.
Kuchengetedza pakutenga nekuderedza mitengo yako pakati peanenge gumi% uye 10%, zvine chekuita neyese bhizinesi mitsara.
Uye pakupedzisira, iwe haugone kukanganwa kuti aya ndiwo maitiro mukushandisa ayo anokura gore rimwe nerimwe uye kuti mune iri dambudziko rehupfumi rinogona kutosimbiswa mune rako bhizinesi zvido.
Mhedzisiro pamakambani makuru e-commerce
Iyo Chinese e-commerce hofori, Alibaba, yakaziva ichi China kuti kufambira mberi kwechirwere checoronavirus (Covid-19) kuchakanganisa bhizinesi rayo, zvese mumari nekukura. Kambani yakayambira kuti denda iri riri kuremedza vatengi nevatengesi, zvinova zvinoshandura kudzikiswa kwemari kutanga kwekota ino.
Mamwe epasi rese e-commerce hofori akanyudzwa mumamiriro akafanana. Kupa yakanangana nechinangwa kune iyo chaiyo mamiriro enzvimbo yepamhepo kutenderera pasirese. Kunyangwe zvichikosha kusimbisa kuti Jesse Cohen, muongorori kuInvesting.com, akavimbisa Reuters kuti purofiti yaAlibaba ichatora rova ​​"munzvimbo mbiri dzinotevera, kunyangwe bhizinesi rakasimba zvekukunda uku kudonha."
Ichokwadi icho chikamu chinozviwana icho
Iwo manejimendi mune ecommerce inoda akateedzana emamiriro ekudzivirira zvido zveichi chiitiko chehunyanzvi mune online fomati. Iko kune dambudziko iri, rinogona kuvhura mikana mitsva yebhizinesi, kunyangwe isina njodzi.
Seyakagadzwa muRoyal Decree 463/2020 yaKurume 14, mashandiro ebasa rekuendesa kwekudya kumba uye zvekutanga padanho renyika zvinochengetwa mumamiriro ehurongwa nekuda kwemamiriro ehutano hutano hwakakonzerwa neCOVID-19 .
Tatarisana nemamiriro ezvinhu aya, STUART, iyo iri kudiwa tekinoroji chikuva inobatanidza chero rudzi rwebhizinesi nemabhiza makuru evanozvimiririra vamiriri venhume, yaita matanho ekudzivirira zvinoenderana nezvakakurudzirwa neBazi rezvehutano, kune vashandi vayo uye nhume dzakazvimirira dzinoshanda pamwe chete nepuratifomu.
Nechinangwa chekupa sevhisi inoderedza magariro uye hupfumi mamiriro ezvinhu akaoma munyika, chikuva ichi chinoramba chichiita basa kuitira kuti vese vanobatsirana navo vanosarudza kubatana kuti varambe vachiwana mari.
Kuita chiitiko panguva yekuvharirwa, kambani yaita mutemo we "Zero Kubata" unosanganisira kudzivirira kusangana pakati pemutumwa uye anotambira, matanho ndeaya:
Usati watanga kugovera zvinokurudzirwa kupfeka mishonga inouraya utachiona gel uye magiravhusi eratex kuti usabatane neganda. Zvakare nekugara uchipfeka ngowani yekudzivirira mudhudhudhu uye chifukidzo chekudzivirira nzira yekufema, kuchenesa kwakazara kwembatya uye zvinhu zvinoshandiswa uye disinfection yezuva nezuva yebhokisi / trunk.
Hapana manejimendi manejimendi. Mirairo inoda manejimendi kutarisirwa inogona kurambwa kana kupihwa zvakare pasina izvi zvine zvazvinoita.
Raira kurongedza. Vatengi vakaudzwa nezve kudiwa kwekushandisa zvizere mabhegi akasimbiswa. Iwo mabhegi anozobatwa nemativi (kwete nemaoko).
Yakakurudzirwa zvipfeko. Zvinokurudzirwa kuti usabvisa ngowani uye kushandisa magurovhosi / maoko akaomeswa nemishonga paunenge uchinhonga odha. Magiravhosi emidhudhudhu haashande sechinhu chehutsanana. Inokurudzirwa kuti isashandise mukuendesa kana kuraira kubata.
Kushandisa bhegi rinopisa. Kamwe iyo odhiyo painounganidzwa, nekukurumidza isa mumudziyo bhegi uye uvhare zvachose. Izvi zvinofanirwa kuve nemishonga inowirirana nezvinoenderana zvigadzirwa.
Dzivisa kuunganidzwa kwevanovagovera panzvimbo dzekuunganidza. Chengeta 1.5 mita kure. 1 munhu mumwe chete mukati meimba uye mutsara uri kunze pa1.5m chinhambwe pakati pevagovera.
Yakakurudzira daro rekuchengetedza. Paunenge uchiendesa odha, zvinokurudzirwa kuti uzvisiye pasuo remugashiri mushure mekumuzivisa nepamusuwo. Siya odha pamusuwo uye unomirira uine chinhambwe chemamirimita maviri kudzamara mugashiri atora odha.
Hapana kudikanwa kwesiginecha. Sezvambotaurwa pamusoro apa, zvinokurudzirwa kumisa chikumbiro chemasaini uye nekumaka zvakananga neX kana odha yacho yaendeswa.
Kunonyanyisa kutarisisa kumashoko. Ruzivo rwekuti ungaita sei kuburitsa kunogona kuoneka mune zvakataurwa zveodha, semuenzaniso: "Ridza bhero uye usiye zvinhu pane kumhara." Izvo zvakakosha kwazvo kuteedzera aya mafambiro.
Disposable rutsigiro pakusununguka. Muchiitiko chekuti kumisikidzwa kunopa napkin kana imwe tsigiro inogona kuraswa, izvi zvinogona kushandiswa mukuendesa odha kuitira kuti zvinhu zvakatakurwa zvirege kubata pasi zvakananga.
Saizvozvowo, Stuart ari kushandisa kurudziro yezviremera zvehutano kuti zvienderane nezvinoitika.
"Kuburikidza ne" Zero Kubata "mutemo, isu tinoda, pamusoro pezvose, kutarisira vatumwa vanoshuvira kuenderera vachiita basa ravo vakazvimirira. Zvakakosha kuti isu tese titeedzere zvirevo zvebazi rezvehutano kuitira kudzora kupararira kwehutachiona ", mumashoko aDavid Guasch, General Director weStuart kuSpain. “Kubva kuchikwata cheStuart tinoda kuendesa kurudziro yekuchengetedza hutano nekuchengeteka mune chero mamiriro ezvinhu. Kana tikatambura zvimwe zvezviratidzo, tinokurudzira kuti vatumwa vatsvage kurapwa nekukasira uye vatevere kurudziro yevanamazvikokota vezvehutano ”. Iko kune dambudziko iri, rinogona kuvhura mikana mitsva yebhizinesi, kunyangwe isina njodzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » Migumisiro yeCOVID-19 pane zvemagetsi zvekutengeserana
Maitiro anozoumba ramangwana rekutengeserana kwemagetsi